Ọ bụrụ na onye ọ bụla ajụọ m, aga m agwa ha na anaghị m arụ ọrụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ. Ihe niile sitere na isi nke ndị na-ebipụta akwụkwọ (amalitere m ọrụ m na mmepụta) site na oge ndị na-agba ọsọ na obere ihe onwunwe. Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na Akwụkwọ akụkọ bụ naanị ndị pụrụ iche… ọ bụ azụmaahịa ebe ụlọ ọrụ na-eji nwayọ ata ahụhụ na-egbu ụmụaka.
Agbanyeghị oge ịkwụsị, mmesa mgbasa, mkpochapu ndị mmadụ, nhazi ọzọ, yana ịrekwa ụlọ ọrụ gị n'okpuru gị, ndị mmadụ siri ọnwụ. Ndi oru nta akuko nwere obi uto, kwesiri ntukwasi obi, ma nwekwaa mmasi igbanwe ndu site na okwu ha. Echere m na inwe akwụkwọ akụkọ ebe ụlọ ọrụ na-anọghị na mpụga mpaghara akwụkwọ akụkọ nwere otu n'ime mmetụta kachasị njọ na ụlọ ọrụ ahụ. Ihe niile site na akụkọ ezigara na ọnwụ nke ndị na-ebu akwụkwọ akụkọ emeela ka ọ bụrụ azụmahịa na-abụghị onye.
Gbalịa ka ha nwere ike, ndị isi ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike iyi ka ha ga-emekọ ọnụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ m kwenyere na ọ ga-adịrịrị ọdịda. Gbalite ọnwụ ha bụ ihe ha chọrọ na-aga n'ihu maka nnukwu uru ma baa ụba - nke a na-ezu ohi itinye ego nke nwere ike inyere akwụkwọ akụkọ aka ịbịaru echi site na itinye ego na ntanetị na ohere mpaghara.
Amaghị m ihe enwere ike ịgbanye n'ime ụlọ ọrụ iji mee ka ọ rụọ ọrụ. 'Ike ndị ga-abụ' agaghị ahapụ ịchịkwa achụmnta ego ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị emetụtala ya. Nsogbu bụ na ha ga-eji akwa akwụ akwụ mara mma ga-apụ mgbe ụgbọ mmiri ha gbadara. Ndụ ndị kachasị emetụta bụ ndị funahụrụ ọrụ ha na anyị, ụmụ amaala chọrọ ndị nta akụkọ ka ha gwuo maka eziokwu.
Ọ bụrụ na ịnwee ohere ịnweta onye nwere ahụmịhe akụkọ akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ IT, Azụmaahịa, Onye nta akụkọ, ma ọ bụ elektrik… M ga-akwado ha nke ukwuu. Menmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ bụ ndị nwere ọgụgụ isi, achọghị ọdịmma onwe ha naanị, na ndị na-arụsi ọrụ ike nke na-agaghị emechu gị ihu. Ọ dị mwute ịhụ ka ụlọ ọrụ na-ebibi onwe ya dị ka nke a.